JIKỌỌ PRO FREE DOWNLOAD - MMEMME NYOCHA - 2019
Ụfọdụ ngwa Google na-ekwe ka olu ederede na ngwaọrụ pụrụ iche pụrụ iche, ụdị nke a nwere ike ịhọrọ site na ntọala. N'isiokwu a, anyị ga-eleba anya na usoro nke gụnyere isi nwoke maka ikwu okwu.
Na-agbanye olu nwoke nwoke Google
Na kọmputa, Google anaghị enye ihe ọ bụla dị mfe ịnweta ederede, ma e wezụga maka onye nsụgharị, nke a na-ahọrọ nhọrọ olu na-akpaghị aka ma nwee ike gbanwere site n'ịgbanwe asụsụ. Otú ọ dị, maka ngwaọrụ gam akporo, e nwere ngwa pụrụ iche nke nwere ike ibudata na ụlọ ahịa Google Play ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa.
Gaa na Google Text-to-Speech page
Software elebara anya abughi ngwa zuru ezu ma bu ngwugwu nke nwughari asụsụ nke sitere na ngalaba nke kwesiri. Iji gbanwee olu gị, mepee ibe. "Ntọala"chọta ngọngọ "Ozi Nkeonwe" ma họrọ "Asụsụ na ntinye aka".
Ọzọ ịchọrọ ịchọta ngalaba. "Ntinye olu" ma họrọ "Nkwupụta okwu".
Ọ bụrụ na ngwugwu ọzọ arụnyere na ndabara, họrọ nhọrọ Onye nchịkọta okwu nke Google. Usoro nkwalite ga-ekwenye na iji igbe.
Mgbe nke ahụ gasị, nhọrọ ndị ọzọ ga-adị.
Na ngalaba "Ọnụ ọgụgụ okwu" Ị nwere ike ịhọrọ ụda olu na ozugbo lelee nsonaazụ na ibe gara aga.
Rịba ama: Ọ bụrụ na ebudatara ngwa ahụ aka, ị ga-ebu ụzọ ibudata asụsụ pack.
Pịa akara ngosi gear na-esote Onye nchịkọta okwu nke Googleịga na nhọrọ asụsụ.
Iji mbido mbụ, ị nwere ike ịgbanwe asụsụ, ma ọ bụrụ na arụnyere na usoro ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ. Site na ndabara, ngwa ahụ na-akwado asụsụ niile, gụnyere Russian.
Na ngalaba Onye nchịkọta okwu nke Google na-enye kwa afọ site na mgbanwe nke ị nwere ike ijikwa okwu okwu Na mgbakwunye, ebe a ị nwere ike ịga ederede nyocha ma ọ bụ kọwaa netwọk maka nbudata nchịkọta ọhụrụ.
Ịhọrọ ihe "Ịwụnye data olu", ị ga-emepe otu peeji nke nwere asụsụ olu. Chọta nhọrọ ịchọrọ ma tinye akara ntinye aka na ya.
Chere ruo mgbe nbudata zuru ezu. Mgbe ụfọdụ, nkwenye nke akwụkwọ nwere ike ịchọrọ ịmalite ibudata.
Nzọụkwụ ikpeazụ bụ ịhọrọ olu olu. N'oge ederede a, nwoke nwere olu "II", "III"ma "IV".
N'agbanyeghi oke nyocha nke ule mere na akpaghi aka. Nke a ga-enye gị ohere ịchọta ọkwa nwoke na nke kachasị mma ma gbanwee ya dị ka achọrọ ya site n'enyemaka nke ngalaba nke ntọala ndị a kpọtụrụ aha.
Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla gbasara isiokwu nke isiokwu a, jụọ anyị na ihe ndị a. Anyị gbalịrị iji tụlee ntinye nke nwoke nwoke Google maka ikwu okwu na ngwaọrụ gam akporo.